FBC - Koreen dhaabbii Caffee Oromiyaa hordoffii fi too'annoof godinaalee Oromiyaa 16tti bobba'e
Koreen dhaabbii Caffee Oromiyaa hordoffii fi too'annoof godinaalee Oromiyaa 16tti bobba'e
Finfinnee, Amajjii 4,2010(FBC)- Koreen dhaabbii Caffee Oromiyaa hojii hordoffii fi too'annoof godinaalee Oromiyaa 16tti bobba'uu isaa ibsa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetif ergeen beeksiseera.
Hojiin hordoffii fi too'annoo kun aanota 32 fi gandoota naannichaa 64 ta'an keessatti qaamaan argamuun kan gaggeefamu yoo ta'u, hojiileen bulchiinsa gaarii walakkaa waggaa kana keessatti ni hojjetamu jedhamanii qabaman raawwin isaanii maal irra akka gahe addatti kan ilaalan ta'as jedhameera.
Keessumattuu sirna oodiitii bajata mootummaatin walqabatee rakkoolee muudataa turan hambisuudhaf dhaabbilee mootummaa irratti xiyyeeffachuun hanqinaa fi cimina jiran ilaaluun koreen dhaabbii kun kallattii fulduraa kan kaa'u ta’a.
Hojii too'annoo fi hordoffii koreen kun gaggeessu boodas rakkoolee fi hanqinoota jiran erga adda basen booda hawaasa waliin marii gaggeessee kallattii gara fulduraa akka kaa'u kan eeggamu ta'uu isaa koreen dhaabbii Caffee mootummaa nannoo Oromiyaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himeera.
Rakkoolee hoggansaa fi bulchiinsa gaaris ta'ee kanneen biroo hawaasni kaasus sadarkaa aanaa irraa hanga federaalaatti qaamolee jiran waliin mari'achuun deebii kennuuf koreen dhaabbii kun kan hordofu yoo ta'u, hojiin too'annoo fi hordoffii gaggeefamu kunis torbanoota lamaan dhufan keessatti kan xumuramu ta'as jedhameera.
Oduuwwan Biroo « Baankin Misooma Ityoophiyaa liqaa laaterraa Birrii biiliyoona 8.6 deebisiisuuf hojjechaan jira jedhe	Koorporeeshiniin Manneen Federaalaa manneen kuma 16 ol ijaarufi »